Akụkọ - Ndozigharị ụkpụrụ ụlọ ọrụ API zuru ụwa ọnụ dị nso
Imezigharị ụkpụrụ ụlọ ọrụ API zuru ụwa ọnụ dị nso
Site na mgbasa nke ọrịa oyi baa ọhụrụ na -efe efe gburugburu ụwa, ọrụ dị mkpa nke akụrụngwa na agbụ ụlọ ọrụ ọgwụ na -apụtawanye nke ọma.
Site na ngwụcha ngwụcha ọrụ na imepụta ụlọ ọrụ API nke obodo m na Febụwarị afọ a, nnweta API zuru ụwa ọnụ siri ike, na mmachi India na mbupụ ngwa API dị iche iche na Machị, nke butere ngosipụta nke nchegbu na enweghị afọ ojuju n'etiti mbubata API. mba. Ndị mba ụwa emetụtala okwu gbasara inye API. Nlebara anya na -enweghị atụ.
Iji nagide mgbanwe na -abịanụ na ụkpụrụ ụlọ ọrụ API zuru ụwa ọnụ, ụlọ ọrụ API nke obodo m kwesịrị ịhazi na ibuga ya tupu oge eruo, ka ha wee gbaa mbọ maka mmepe ka mma na asọmpi yinye ụlọ ọrụ n'ọdịnihu.
Nke mbụ bụ itinye ike n'agbụ ụlọ ọrụ ọgwụ na ụwa wee guzobe mmekọrịta na-adịte aka na nke siri ike na ụlọ ọrụ dị elu na ndị dị n'okpuru ala. Naanị site na ijikọ ọdịmma ka ọ ga -esi ike “ikewapụ” ma gbaa mbọ nweta ikike ikwu okwu.
Nke abụọ bụ ịkwalite uru ọnụ ahịa site na nkwalite teknụzụ, mgbanwe usoro yana imepụta nnukwu ihe.
Nke atọ bụ ịbawanye ihe ọhụrụ na nyocha na mbọ mmepe. Mmepe nke mmepe ngwaahịa na -aga na ntụzịaka nke ụdị ndị ekewara ekewa nwere usoro dị mgbagwoju anya na ọnụ ahịa agbakwunyere dị elu, etinyere ụfọdụ ọnụ ụzọ ọrụ aka; a na -akwalite mmepe usoro ka arụmọrụ dị elu, mmetọ dị ala na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Nke anọ abughi nani itinye uru n'ahịa mba ofesi, kamakwa iburu n'uche ahịa ụlọ, gbalịsie ike na -eje ije ma n'ime ụlọ na nke mba ọzọ, iji gbochie ihe omume '' black swan '' nke mba ụwa ịkpalite mgbanwe ahịa na ọgba aghara nlanarị.
Post oge: Jun-29-2020